Mitombo ny varotra azo amidy eran'izao tontolo izao | Androidsis
Ny sehatry ny akanjo dia mitohy manana fotoana mahafinaritra. Mihamaro ny marika manana ny famantaranandrony na fehin-tànany, zavatra iray mampitombo ity tsena ity amin'ny hafainganam-pandeha. Hitanay tamin'ity taona ity fa manana marika tsara ny marika sasany amin'ity fizarana ity, toy ny tranga an'ny Samsung. Amin'ny ankapobeny, ity tsena ity dia mitombo manerana an'izao tontolo izao.
Ny angon-drakitra vaovao dia naseho momba ny varotra azo ampiasaina amin'izao tontolo izao amin'ny telovolana fahatelo amin'ny taona. Noho ireo angona ireo dia hita fa ny ny varotra dia nitombo 65% manerantany ao anatin'izay telo volana izay. Izay dia dingana tsara ho an'ity fizarana ity, izay manararaotra tsara ny marika sasany.
Amin'ity sehatry ny akanjo ity, Xiaomi no maka ny laharana voalohany, miaraka amin'ny fitomboana lehibe raha oharina tamin'ny taona lasa. Ny marika sinoa dia mahita ny fiakaran'ny vidiny 74,4% raha oharina tamin'ny taon-dasa. Noho io dia mijanona ho mafy orina sy mampitombo ny elanelany miaraka amin'i Apple izy, izay no faharoa amin'ity tranga ity.
Huawei no iray mijanona amin'ny laharana fahatelo, manamafy ny fitomboana izay izy ireo dia efa nahazo tamin'ny volana voalohany amin'ity taona ity. Ao ambadiky ny marika sinoa no ahitantsika ny Fitbit sy Samsung manidy ny Top 5. Ny marika Koreana dia mitombo tsikelikely, indrindra noho ny fiambenana.
Raha ny lafiny faritra dia i Azia indrindra fa ny fivarotana entam-barotra dia nitombo indrindra tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny taona. Ireo firenena toa an'i Shina dia nanana fitomboan'ny 243% amin'ireto varotra ireto, noho izany dia mazava ny zanabola ateraky ny fehin-tanana sy famantaranandro ao amin'ireo tsena ireo.
Hifarana amin'ny taona noho izany ny fiakarana miavaka amin'ny fivarotana entina entina manerana an'izao tontolo izao. Mahaliana ny manana ny angona ao anatin'ny roa volana ary hahitana raha mitohy ity fironana ity na tsia. Ny mazava dia izao: mihamaro hatrany ireo marika liana amin'ity sehatra ity, mamoaka vokatra ho azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny varotra azo zahana dia mitombo hatrany manerantany
Ny ZTE Axon 10s Pro dia ho tonga amin'ny MWC 2020
Google Maps dia manandrana interface vaovao